Barakac ka billowday Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Barakac ka billowday Muqdisho
Waxaa billowday barakaca dadka shacabka ah ee ku nool xaafado ka mida magaalada Muqdisho, iyagoo ka baxsanaya dagaallo la filayo in dib uga billowdaan magaalada Muqdisho
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Muqdisho waxaa ka billowday barakaca dadka shacabka ah ee ku nool xaafado ka mida magaalada, goobihii hore ee ay dagaalladu ka dhaceen ayey qoysaskii u dhawaa oo dhan isaga baxeen, welina waxaa socda barakaca dadka rayidka ah ee halkaas ku haray.
Xalay waxaa qoysas kamida kuwa ku nool xaafadda Siigaale ee ka tirsan degmada Hodan lagu war galiyay in ay isaga baxaan, maadaama kooxaha mucaaradka ee hubeysan ay fariisimo hor leh ka sameysteen xaafaddaasi, waxaana qoysaskii ku noolaa agagaarka Suuqa bakaaraha ilaa dalcadda isgoyska dabka ay billaabeen in ay isagaba baxaan halkaasi.
Dhinaca Waqooye ee Caasimadda waxaa sidoo kale billowday barakac baahsan, iyadoo xaafado kamida degmada Kaaraan ay billaabeen qoysaska in ay halkaa isaga baxaan, qaar kamida dadkaasi oo adeegsanayay gaari dameerro ayaa sheegay in ay ka qaxayaan colaadda ka billaabatay magaalada Muqdisho.
Wadooyinka ayaa saaka lagu arkayay dad barakacaya oo u badan Hooyooyin, Caruur, iyo dad waayeelo ah, kuwaas gacmaha iyo garbaha ku sitay alaabo yaryar oo aay ka qaateen guryahooda.
Qoysaska danyarta ah ee isaga baxsanaya colaadda ayaa waxay ka codsadeen dhinacyada isku haya magaalada Muqdisho in ay xabadda ka joojiyaan.
Inkastoo Beesha Caalamka ay sheegeen in aan la aqbali karin dagaalka, hadana wali ma jirto go'aan adag oo ay ka gaareen xaaladda cakiran ee dalka.
Ciidamada taabacsan Musharixiinta mucaaradka ayaa qabsaday Xaafadaha ku teendsan jidka Makka Al-Mukarama dhanka degmada Hodon, Howlwadaag iyo Isgoysyo kala oo Sanca iyo Marinaayo kamid yihiin.